Desktop Standထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း | Moutik
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Desktop Stand
Touch screen စက်ဘီး Broacket Mountproof Sabof Socke Mountain Bike Mountain Bike Mountain Bike
360 ° RATIATITIR CORGE MOULD, Universal စက်ဘီးဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ iPhone X / 8/7/6 Plus အတွက်ချိန်ညှိနိုင်သောဆီလီကွန်လက်ကိုင်ဒီဇိုင်း, Samsung Galaxy S8 Plus နှင့် 4.7 "-6" s8 pluss,
flat stand stand attrierable တက်တက်ဘလက် pc stand moutik မှမိတ်ဆက်
Moutik Intro သည် Flat Stand Adjoldable Slacker Tablet PC Stand Moutik, OEM နှင့် ODM ပေးသွင်းသူ
ဆဲလ်ဖုန်းစက်ဘီးဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ Bike တောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမိုဘိုင်းဖုန်း
စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စက်ဘီးစမတ်ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ 360 လှည့်စက်ဘီးစီးစက်ဘီးစီးသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ
စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စက်ဘီးစမတ်ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ 360 လည်ပတ်စက်ဘီးစီးစက်ဘီးစီးသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ။
စက်ဘီးဖုန်းကိုင်ဆောင်သူမိုဘိုင်းသည်စက်ဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးဆင်းမှုအတွက်ဆဲလ်ဖုန်း bracket ကိုရပ်နေသည်
21 2021-02-27 12:18:08 ။ဤထုတ်ကုန်သည်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုရရှိစေသည်။ လတ်ဆတ်သောလေထုအိပ်ပျော်နေသောသူတို့အဘို့, ဒီအားရစရာဖြစ်လိမ့်မည်။
OD6B / Wအသွင်အပြင်:2-in-1 မီးဖိုချောင်တောင်ရပ်သင်၏တက်ဘလက်ကို 2-in-1 Kitchen Mount Stand နှင့်သင်၏ခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်နေရာတွင်တပ်ဆင်ပါ။အဆင်ပြေသောတောင်ပေါ် - မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအခြေစိုက်စခန်း ၂ ခုပါ ၀ င်သောဤတက်ဘလက်သည်နံရံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကက်ဘိနက်အောက်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ မီးဖိုချောင်အတွက်သစ်သားတက်ဘလက်ကိုင်ဆောင်သူ၊ စာဖတ်သူကိုင်ထားသူ၊ စာအုပ်ကိုင်ထားသူသို့မဟုတ်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆိုတိုးချဲ့ထားသောခြေထောက်များဖြင့်မတ်တပ်ရပ်သည်။Tablet မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိုင်သူတွင် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်သည့်ကိုင်ဆောင်ထားသည့်အပြင်အမျိုးမျိုးသောမဏ္multipleိုင်နှင့်အလှည့်အဆစ်ပါရှိသည်။ လျင်မြန်စွာလွှတ်ပေးသောခလုတ်များသည်အရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်သောကိုင်ဆောင်ထားသူမှလွယ်ကူသောတက်ဘလက်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးအသုံးမပြုသည့်အခါလွယ်ကူစွာသိုလှောင်ရန်အတွက်ရပ်တည်ထားသည့်ခေါက်များသည်။
universal Cross- ပုံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် DIY ဖုန်း Tablet Holder
GD0087အသွင်အပြင်: 1. Cross-shaped ခြေလျင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပစ္စည်းနှင့်လုပ်သောကြောင့်မည်သည့်ပုံသဏ္DIာန် DIY ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေသည်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးလက်တွေ့ကျသည်။၃။ iPad၊ iPad Mini၊ iPad 4၊ iPad 2၊ iPad3ကဲ့သို့သောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်၄။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းများစွာသည်ကွေးတစ်ပေမှတစ်ဆင့်ဟွတ် (သို့) ထောက်ပံ့မှုဘောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်5. တည်ငြိမ်သောစားပွဲ, ကားရဲ့ပိတ်ဆို့, ကုလားထိုင်ရဲ့နောက်ကျော, ခရီးဆောင်အိတ်ရဲ့လက်ကိုင်နှင့်များစွာသောအခြားအခါသမယအတွက်တက်ဘလက် fixed
Universal ဘက်စုံသုံးအိတ်ဆောင်ပင့်ကူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆုပ်ကိုင် Hang Mount Stand ဖုန်းကိုင်သူ
GG016Bဘက်ပေါင်းစုံပါသောပျင်းရိသောအိပ်ယာလွယ်ကူသောပင့်ကူကားတက်ဘလက်များ Ipad လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက်ဖုန်းကိုင်သူ
GG016A။ဘက်ပေါင်းစုံပါသောပျင်းရိသောအိပ်ယာလွယ်ကူသောပင့်ကူကားတက်ဘလက်များ Ipad လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက်ဖုန်းကိုင်သူUniversal ဘက်စုံသုံးအိတ်ဆောင်ပင့်ကူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆုပ်ကိုင် Hang Hang Stand ဖုန်းကိုင်သူ၊ပစ္စည်း: Aluminum Alloy + ABS + Silicone
Universal Cross-Shaped ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် DIY Tablet Holder ပါဝင်သော Expandable Stand နှင့် Tablet အတွက် Grid ပါရှိသည်
GD0086အသွင်အပြင်: 1. Cross-shaped ခြေလျင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပစ္စည်းနှင့်လုပ်သောကြောင့်မည်သည့်ပုံသဏ္DIာန် DIY ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေသည်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးလက်တွေ့ကျသည်။၃။ iPad၊ iPad Mini၊ iPad 4၊ iPad 2၊ iPad3ကဲ့သို့သောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်၄။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းများစွာသည်ကွေးတစ်ပေမှတစ်ဆင့်ဟွတ် (သို့) ထောက်ပံ့မှုဘောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်5. တည်ငြိမ်သောစားပွဲ, ကားရဲ့ပိတ်ဆို့, ကုလားထိုင်ရဲ့နောက်ကျော, အိတ်ရဲ့လက်ကိုင်နှင့်များစွာသောအခြားအခါသမယအတွက်တက်ဘလက် fixed